AMBOHIMAHITSY SY AMBATOMARO Mpanendaka efa gadralava sarona
Rehefa nohadihadian’ny polisy ireo lehilahy roa, 20 sy 25 taona voasambotra teny Ambatomaro sy Makoline/Ambohimahitsy ny
7 sy 8 oktobra mikasika ny endaka miaro herisetra amin’ny fampiasana fitaovam-piadiana ary koa fikambanan-jiolahy dia fantatra fa mpameri-keloka amin’ny resaka halatra ka ny iray nigadra tany Antanimora ka nivoaka ny taona 2017 ary ny iray kosa efa nigadra teny Tsiafahy ary nivoaka ny volana desambra 2018. Araka ny fantatra dia lehilahy telo no nanendaka olona teny Ambatomaro ny 7 oktobra teo tokony ho tamin’ny 7 ora hariva. Nitondra antsy lava izy ireo tamin’izany nentiny nanendahana ilay olona. Nisy anefa ny fisafoana sy ny fisavana nataon’ny polisy teny amin’ny elakela-trano any amin’ny faritra Ambatomaro iny ka tamin’izany no nahatrarana antsy lava tany anatin’ny kitapony. Noentina teny amin’ny kaomisaria ity lehilahy natao fanadihadiana ka fantatra fa avy nanendaka teny amin’ny faritra Ambatomaro iny izy ary nisy namana nanampy azy. Ny 8 oktobra, voasambotra teny amin’ny Makoline/Ambohimahitsy ilay niara-nanendaka taminy. Maro ireo fitarainan’ny olona mahakasika ny asa ratsy hafitsok’ireo lehilahy ireo teny amin’ny faritra Ambatomaro, Ravinala, ary Tsarahonenana.